Ahoana ny fanasana ny kiraronao sy hahatonga azy ireo ho tonga lafatra | Bezzia
Toñy Torres | 17/07/2021 16:00 | an-trano
Raha iray amin'ireo mpitia fampiononana maro ianao ary manambatra ny kiraranao amin'ny fijery rehetra dia sambatra ianao satria efa fironana tanteraka izy ireo. Na lamba lamba, kiraro na miloko mahazatra, ny kiraro dia iray amin'ireo akanjo ankafizinao. Azonao atao ny manambatra azy ireo amin'ny fomba sy akanjo rehetra ary koa mahazo aina.
Ankehitriny, ny fanaovana Sneakers sy ny filamatra dia tsy dia tsotra, satria kiraro mora maloto izy ireo. Ary tsy misy zavatra manaingo mihoatra ny kiraro maloto. Raha tsy azonao antoka ny fanasana kiraro ary tonga lafatra izy ireo dia aza hadinoina ireo torohevitra sy tetika rehetra avelanay eto ambany.
Ahoana no fanasana kiraro?
rehetra kapany Tsy mitovy izy ireo, raha ny marina, misy karazan-damba maro samy hafa izay manasarotra ny asan'ny kiraro fanadiovana bebe kokoa. Alohan'ny hanasana azy ireo dia tokony hojerenao ny tolo-kevitr'ireo mpanamboatra azy ireo ary hahitana raha azo apetraka ao anaty milina fanasan-damba izy ireo na tsia. Na dia azo inoana aza fa azonao atao ny manasa azy ireo tsy misy olana, nefa misy toro-hevitra vitsivitsy momba ny mari-pana sy ny fihodinana.
Mba hanasana ny kiraronao sy hahatonga azy ireo ho tonga lafatra dia tsy maintsy atokanao ny faritra misy azy sy hosasana tsirairay. Mariho ireto torohevitra ireto:
Ny kofehy: Tsy afaka manasa ny kiraro amin'ny kofehy ianao, satria tsy afaka diovina tsara. Ho fanampin'izany, hosakanany ny rano sy ny savony tsy hahatratra ny zorony anatiny amin'ny kiraro. Esory ireo kofehy ary atsobohy ao anaty rano amin'ny rano, detérrement bleaching, na soda.
Ireo insoles: ao amin'ireo insoles dia miangona ireo bakteria mamokatra fofona ratsy. Ny fanadiovana azy ireo matetika dia tena ilaina mba hisorohana ny holatra sy ny fofon'ny tongotra. Saingy tsara kokoa ny manasa azy ireo amin'ny tànana, satria ao amin'ny milina fanasan-damba dia mety hiharatsy izy ireo ary afaka mivaky mora foana. Avoahy ireo modely ary alemana anaty rano mifangaro, vinaingitra fotsy, ary soda.
Ny tokana: Ilay ampahany mirary maloto indrindra dia ny irery, mba hahafahanao manasa azy matetika kokoa nefa tsy mila manasa kiraro tanteraka. Mampiasà borosy kely, manorisa borosy fantsika, kosohy amin'ny detergent mandra-pialan'ny loto.
Tongotra manadio: Raha fotsy ny faladianao, dia azonao atao ny mampiasa «pochement» manafotsy. Mikosoha borosy nify taloha ary ho hitanao ny mahasamihafa azy.
Ny lamba: Raha azo nosasana ny masonao, dia mila manasa lamba fohy fotsiny ianao, mangatsiaka ary tsy misy prewash. Na dia tsy tokony hatao aza ny mametraka matetika ny kiraro amin'ny milina fanasan-damba, satria ny faritra metaly amin'ny kofehy sy ny kitron'ny kiraro dia mety ho simba mora foana.
Ahoana ny fanasana kiraro fotsy
Tsy misy fahavaratra izay tsy mampiasa kiraro fotsy, mahazo aina izy ireo, mora mitambatra amin'ny akanjo rehetra ary mety tsara isan'andro. Ny ampahany ratsy dia ny fahalotoany mora foana, ka indraindray kamo ny mampiasa azy ireo. Indrindra raha tsy hainao ny manadio azy ireo mba hitohizan'izy ireo hatrany ny loko fotsy amin'ny andro voalohany. Ny vaovao tsara dia hoe amin'ireto fikafika ireto dia hataonao lasa vaovao ny kiraronao fotsy.
Mba hanasana ny kiraronao vita amin'ny lamba fotsy dia esory aloha ireo kofehy ary hosasana tsirairay. Avy eo mampiasa borosy kely hanala ny vovoka amin'ny lamba. Raha manana tasy izy ireo, dia manomàna rano mifangaro, vinaingitra fotsy ary bikarbonate ary kosohy amin'ny borosy amin'ilay ampahany ho tsaboina. Ankehitriny, manomàna koveta misy rano mafana, ampio soda sotro fihinanana 2 sotro fihinanana ary savony lovia 2 hafa tsy misy loko.
Atsofohy mandritra ny minitra vitsy ny kapa vita amin'ny lamba ary ampiasao ilay borosy hanadiovana tsara ny lamba rehetra. Sasao amin'ny savony microfiber voahosotra anaty rano mangatsiaka ny savony. Mba hamaranana dia avelao ho maina ny rivotra ary hisoroka ny tara-pahazavana mivantana. Na dia fanamainana voajanahary aza izy io dia mety hanimba ny lamba kiraronao. Apetraho amin'ny faritra malama izy ireo ary avelao ho maina tanteraka alohan'ny hampiasana azy ireo indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Ahoana ny fanasana ny kiraronao sy hahatonga azy ireo ho tonga lafatra
Akorandriaka proteinina 3 namboarina hofaritana
Bevohoka masoandro: eny sa tsia?